Taliska Milateriga oo sheegay inay Alshabaab ka xoreynayaan Gobolka Sh/Dhexe iyo dagaaladii ugu danbeeyay.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Taliska Milateriga oo sheegay inay Alshabaab ka xoreynayaan Gobolka Sh/Dhexe iyo dagaaladii ugu danbeeyay.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Taliska ciidamada Xoogga dalka ayaa shaaciyey in howlgalka dagaal ee ka socda Gobolka Shabeellada Dhexe, ujeedkiisu yahay in Alshabaab laga saaro Gobolka oo dhan.
Afhayeenka Ciidanka xoogga G/S Cali Xaashi Cabdi ayaa warbaahinta u sheegay in taliyaha ciidamada xoogga dalka uu hoggaaminayo dagaalka, isla markaana ay ka go’an tahay inay ka xoreeyaan Gobolka Sh/Dhexe.
Dagaalladii ugu dabeeyay ayuu sheegay inay shalay iyo maanta ka dhaceen degaanada kala ah: Araxley, Cali fooldheere iyo Qurac-madoobe, iyadoo dhulkii la duqeeyay uu sheegay in lagu arkay meydadka Alshabaab oo gaaraya 17 iyo dhaawacyo ay jiiteen.
Weli waxaa Gobolka Sh/Dhexe ka socda howlgalka ciidamadda xoogga dalka oo ay garab siinayaan kuwa Booliska maamulka Hirshabeelle, iyadoo bishii labaad ay galeen howlgalladaasi.
Previous articleGuddoomiyihii hore ee Gedo oo shaaciyey inay madaxda Hay’adda NISA ku xayireen Muqdisho
Next articleAqalka Sare oo sharci darro ka dhigay Lix Sharci oo uu saxiixay Farmaajo (Akhriso laba Guddi oo digniin laga..)